वियोगान्त उपन्यास स्मारिकाको एक झलक | मझेरी डट कम
कावासोती नगरपालिकामा आजकल युवाहरू साहित्यको विकासको लागि लागिपरेको पाइन्छ । यहाँ कहिले एकल कविता वाचन हुन्छ भने कहिले युगल गजल वाचन तथा गजल गायनका कार्यक्रम भएको पाइन्छ । साधाना सङ्गमको मासिक साहित्यिक कार्यक्रम एनकेन चलेकै छ । साहित्यिक संस्थाहरूले पनि साहित्यिक कार्यक्रम फाटफुट सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।मध्यविन्दु, सामर्थ्य, नवलपुर र कावासोती एफएमहरूले पनि साहित्यिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर साहित्यको सवलताको लागि सेवा पुर्याइरहेका छन् । देउचुली र स्टार च्यानल पनि साहित्यिक कार्यक्रममा सकृय देखिन्छन् ।कृतिहरू पनि प्रकाशन भै रहेकाा छन् । कमृति प्रकाशनको सन्दर्भमा, २०५४, पिँडीखोलामा पिता तिलक चापागाई र माता सीता चापागाईको पुत्ररत्नको रूपर्मा जन्मनु भएका सुदीप चापागाईले स्मारिका नामक एउटा चाखिलो र रसिलो उपान्यास लिएर हाम्रोसामु उपस्थित भएका छन् । हुनत नेपाली उपन्यासले आजसम्म फड्को मारिसकेको छ तापनि सुदीप चापागाईको यो नविनतम उपन्यासले उपन्यास क्षेत्रमा एउटा कृति थप्न सघाउ पुर्याएको छ ।
कृतिको संरचना –स्मारिका उपन्यास आवरण पृष्ठ बाहेक ९६ पृष्ठको छ । यसको प्रकाशन त्रिवेणी साहित्य परिषद् नवलपरासीले गरेको छ । मूल्य २२५/–रु राखिएको छ । यस कृतिको प्रकाशकीय प्रा.डा. नारायणप्रसाद खनालले लेख्नुभएको छ । यस कृतिले कसैको भूमिका पाएको छैन तापनि प्रा.डा. नारयणप्रसाद खनालले प्रकाशकीयमा नै यस उपन्यासको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै लेख्नुहुन्छ – ‘‘सिकारु स्रष्टाको सृजना भए तापनि आधुनिक सञ्चारका केही ट्रिकहरूको समेत उपयोगले रोचक बनेको छ’’ । स्वय म उपन्यासकारले लेख्नुहुन्छ –‘‘प्रेम दुई अक्षरले बनेको हुन्छ तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ यी नै दुई अक्षरभित्र सारा संस।र अटाएको छ ’’ । वास्तवमा यो वियोगान्त प्रेमको आँसुले सिँचित यो उपन्यासमा सुदीपजीले प्रेमका भावनाहरू निकै बगाउनु भएको छ । कतै प्रेमरोमाञ्चको रसिलोपनामा सबैलाई खुसदिल बनाउनुहुन्छ भने कतै आफै रुने र पाठकलाई रुवाउने काम पनि गर्नुहुन्छ ।
कथा सार – कावासोतीमा बसोबास गर्ने स्मारिका र स्मरणको भेट बसमा भएको र स्मारिका दलदलेमा गाडीबाट ओर्लिएको तर यहाँ कुनै वार्तालाप हुन नसकेको । स्मरण फर्कदा तिनै स्मरणकी ड्रिमगर्ल उनकै सिटमा बस्न पुग्छिन् । यस पटक दुवै जनाको वार्तालाप सुरु हुन्छ । स्मरण स्मारिकाको रूपमा निकै आकर्षक हुन्छन् तर स्मारिका भने सागरसँग आकर्षक भएकी र सागरले स्वार्थपूर्ति गर्न अर्था शारीरिक सन्तुष्टि चाहेको तर स्मारिकाले स्वार्थपूर्ति गर्न सहमत नभए पछि स्मरणसँग उसको प्रेमको मार्ग अघि बढ्छ । स्मरण र स्मारि।काको प्रेम गाढा बन्दै जान्छ । पार्कमा भेटघाट तीब्र बन्दै जाँदा स्मारिकाको दाइले दुवै बीचको प्रेममा आलिङ्गन गर्दा देखेपछि, यी दुवैलाई अलग्याइ दिए र फिनल्याण्डमा पुर्याइ दिन्छन् । स्मारिकाको विवाहको निधो भयो । आफ्नो इच्छ्या विपरित विवाहमा हुने भए पछि स्मारिकाले आत्मा हत्या गरेको कुरा स्मरणले जानकारी प्राप्त गरेर आँखाबाट आँसु झारदै उपन्यासको कथा समाप्त हुन्छ । कथा मार्मिक छ । प्रेमका घटनाक्रमहरू पनि उतार चढाव छन् । दुवैमा तड्पन छ । मिलनको सम्भावना क्षिण हुँदै गएकोछ ।
उपन्यासले दिन खोजेको सन्देश – आजका युवा युवतीले प्रेमको मार्ग अवलम्वन गर्छन् । प्रेम गर्नु अपराध होइन तर घर परिवारले छोरा या छोरीले चाहेको प्रेमको मार्गलाई स्वीकार्य गर्छन् या गर्दैनन् । यदि स्वीकार गर्दैनन् भने पनि प्रेम बन्धनमा बाँधिएपछि हिक्मत गर्नु पर्छ र वैवाहिकतामा जोडिन सक्नु पर्छ । यस उपन्यासले त्यो मार्ग अवलम्वन गर्न सकेको छैन । स्मारिकालाई सागरले यौन उपभोकको लागि अगाडि बढाएको हुन्छ तर स्मारिकाले यौन शोषणबाट मुक्त हुन खोज्नु र त्यस्ता नरपिचासबाट मुक्ति लिनु निश्चय पनि सवल पक्ष हो तर स्मरणलाई वागमा बोलाएर सागरसँग आफू टाँसिएको स्मरणलाई देखाउनु, स्मरणले उसको रूपमा मोहित भएर सागरकी प्रेमिकाकापछि लाग्नु र उसलाई आफ्नो समिप आएको मा, ‘‘ त्यो दिन म निकै खुसी थिएँ, स्मारिकालाई पाउन गरेको तपस्याको फल मिलेको थियो । मलाई कताकता लाज मिश्रित डर लागिरहेको थियो’’, भन्नु पनि कता कता नाटकीय प्रस्तुति जस्तो लाग्छ । स्मरणले यौन सम्पर्क र मायालाई एउटै डोरीमा बाध्न नहुने धारणा जो प्रस्तुत गरेका छन् ।सच्चा प्रेम मनबाट गरिने र भौतिक शरीरबाट होइन भन्ने निश्चय पनि एउटा सवल पक्ष हो । आजको युगमा पनि हाम्रा युवा युवतीहरूले आफ्नो जीवन साथी स्वतन्त्ररूपमा छनौट गर्न पाउँदैनन् । अभिभावकको बन्धनमा जेलिनु परेको छ र जीवनभर तडपिएर जीवन बिताउन बाध्य छन् युवा युवतीहरू । अध्ययनको क्रममा सानो उमेरमै प्रेममा आकृष्ट हुनाले आफ्नो अध्ययनको निर्दिष्ट उदेश्य हाँसिल गर्न नसकेको सन्देश दिएको छ । उपन्यासले आधुनिक संचारको माध्यम जस्तै मोवाइलले आजको समाजलाई सुधारमुखी बनाउनुको सट्टा विकृतितिर मोडेको छ । यस उपन्यासको विक्रम पात्रले स्मारिका बनेर स्मरण बीच बात मारिहेको हुन्छ । यस्ता वित्रृmतिहरू छ्यापछ्याप्ती देखिन्छन् । युवा युवती यस्तो काममा सतर्क हुनु पर्छ भन्ने सन्देश पनि उपन्यासले दिएको छ । फेसबुकको आइडी कसैले कसैलाई दिन हुँदैन भन्ने सन्देश पनि यस उपन्यासले दिन खोजेको छ ।
भाषा शैली – भाषा सरल छ, प्रस्तुति पनि राम्रो छ । मिठास भर्न अङ्ग्रेजी शब्दहरू प्रयोगमा ल्याइएका छन् । भाषागत शुद्धताको हिसावले हेर्दा यसलाई निश्चय पनि सहस्र स्वकिारोक्ति मानिदैन तर अङ्ग्रेजी शब्दहरू जो जनजीव्रोको रूपमा प्रयोगमा आएका छन्लाई प्रयोग गर्नु पर्छ भन्ने मेरो आफ्नो धारणा छ ।
शीर्षकी करण –स्मारिकाको साराजीवनको यथार्थतालाई प्रष्ट्याउने जुन प्रयास गरिएको छ, त्यसको आधारमा हेर्दा शीर्षक सार्थक छ ।
पात्रहरू–स्मारिका र स्मरण मुख्य पात्रको रूपमा देखिएका छन् तापनि सागर स्मरणभन्दा पहिला देखा परेको तर स्वार्थी भएकोले स्मारिकाले ग्रहण गर्न नसकेको पात्र हो । विक्रम स्मरणको साथी भए पनि स्मारिका बनेर फेसबुकमा स्मरणसँग कुरा गर्ने व्यक्ति, सीमा स्मारिकाकी असल साथी जस्ले विकmमलाई स्मारिकाको फेसबुकको आइडी दिएकी थिई । सङ्गीता सीमा र स्मरण मिल्ने साथी । सुदीप र स्मारिको दाजुर आमा र बाबु पनि यस उपन्यासका पात्र हुन् । स्मारिकासँग विवाह निधो गरिएको युवक पनि यस उपन्यासको पात्र हो । वास्तवमा यसमा भएका पात्रहरू सबै साधारणा छन् । सागर प्रथम प्रेमिकाको रूपमा देखिए पनि यो नायक बनेर नायिकालाई डोर्याउन सकेको छैन केवल शारीरिक सम्बन्धमा टेवा दिएको छ । स्मरण र स्मारिकाले पनि प्रेममा जति नजिक भए त्यति समाजको बन्धनलाई तोडन सकेका छैनन् । दुवै तड्पिएका छन् र यिनीहरूको वियोगान्त पीडामा पिल्सिंदै स्मारिकाले आत्महत्या गरेकी छन् भने स्मरणले प्रेममा जीवनलाई तहस नहस पारेका छन् ।
परिवेश–कावासोती, नारायणी नदी किनार वागहरू, दलदले, काठमाडौ, फिनल्याण्डको परिवेशमा लेखिएको उपन्यास हो यो ।
अत : उपन्यासकारले रसिलो रूपमा उपन्यासको प्रस्तुति गरेका छन् । उपन्यासको कथा यथार्थ हुन सक्छ । काल्पनिक कथाको आधारमा उपन्यासकारले उपन्यास लेखेको भएमा वियोगान्त नभै दुवैको मिलन गराइएको भए उपन्यास अति उ्च्च हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । उपन्यासकारले प्रयोगमा ल्याएक उद्गारहरूले उपन्यासलाई पढौ पढौ जस्ताो बनाउँछ र आनन्द पनि दिन्छ । प्रथम प्रयास भए पनि उपन्यासकारको प्रयासको प्रशंसा गर्दै चाँडोभन्दा चाँडै नयाँ कृतिको अध्ययन गर्न पाइवस भन्ने सुभइच्छ्या राख्दै बिदा चाहन्छु ।
कावासोती, वडा नं ७, नवलपुर
२०७४ साल भाद्र २६ गते,
मनको बाँध फुट्नलाई चर्किएछ आज
हेरी रहे जुनलाई
निक्कै मख्ख पर्छेयो,
नभेटे रै साटिएछन,प्रिय हाम्रो मन
देश भयो अखडा
अश्मिता लुट्छन यहाँ
साहित्यिक महोत्सव र क्यान्टोनमेन्टको बास
इहि नेवाः थिती
तिमी पारि पुगेपछि
अझै फेरि बिद्रोहको राँको
यमराजले, सपनीमा, घरी-घरी, छल्न थाल्यो